त्यसै जिताएका हैनन् भैरहवाका मधेशी जनताले एमालेलाई, यस्तो छ मधेशी दल ढल्नुको कारण – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / त्यसै जिताएका हैनन् भैरहवाका मधेशी जनताले एमालेलाई, यस्तो छ मधेशी दल ढल्नुको कारण
त्यसै जिताएका हैनन् भैरहवाका मधेशी जनताले एमालेलाई, यस्तो छ मधेशी दल ढल्नुको कारण
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर July 6, 2017	Comments 103 Views
भैरहवाका मधेशी जनताले एमालेलाई रोज्नु अनि फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम जस्ता दलहरु ढल्नुका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । तीमध्ये एमालेमा देखिएको एकता, एमालेले लिएको नीति र मधेशी जनताका पक्षमा गरेका काम नै मुख्य हुन् । आफूलाई सँधै मधेशी समुदायको मसिहा भन्ने दलहरुले आफ्नो बुई चढेर राजनीति गरेको देखेर पश्चिम तराईका मधेशी समुदाय असन्तुष्ट छ ।
भैरहवा । गत फागुन २९ गते भैरहवामा नेकपा (एमाले)ले ठूलो आमसभा गर्यो । एमालेको दाबी अनुसार सभामा ५० हजार जनसहभागिता थियो । सभा भन्दा अगाडि मधेसी मोर्चा निकट दल बाहेक अन्य दलले ठूला सभा गर्न सकेका थिएनन् । मान्छे जति उपस्थित भएता पनि २०७० यता त्यति धेरै जनसागर उर्लेको पहिलो होला । त्यसपछि अन्य दलले पनि चुनाबी सभा सम्पन्न गरे ।
सभा मेची महाकाली अभियान अन्तरगत भएको थियो । भैरहवाको मुख्य बजारमा सभा गर्दा मधेसी मोर्चासँग झडप हुने डरले स्थानिय प्रशासनले केही किलोमिटर उत्तरतर्फ मात्र सभा गर्न दिएको थियो । हजारौँको सहभागितामा सम्पन्न सभालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्दै पश्चिम तराईको भैरहवा लगायत सबै क्षेत्र स्थानिय निर्वाचनपश्चात एमालेमय हुने उद्घोष गरेका थिए । ओली लगायतका एमाले शीर्ष नेतृत्वले सभालाई सम्बोधन गरिरहँदा रुपन्देहीमा मधेसी मोर्चाले आमहड्ताल आह्वान गरेको थियो । आमहड्तालका बीच सभामा हजारौँको सहभागिता देखेपछि नेताहरु उत्साहितपुर्ण भाषण गर्दै गए । सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले केही दिनमै ब्यालेटमार्फत भैरहवा लगायतको क्षेत्र एमाले कब्जामा जाने भनेर दृढतापुर्वक भाषण गर्दा केही केही सहभागीहरुले ओलीको भाषणलाई हावादारी भनेर टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्थ्यो । जुन कुरा सामाजिक सन्जालमा पनि छ्यापछयाप्ती भयो ।
चैत्र अन्तिम साता लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघको सभाहलमा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा एमालेले सिद्धार्थनगरमा एकल उमेदवारी दिने अनौपचारिक घोषणा गर्यो । बैशाख ४ गते होटल क्यासलमा आयोजित नगरको विस्तारित बैठकमा हरिप्रसाद अधिकारी मेयर सर्वसम्मत उमेदवार घोषणा भए । मेयरका आकांक्षी डा. रामप्रसाद बस्यालले नै अप्रत्यासित रुपमा अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेपछि भरिभराउ उक्त हल खुसीले गुन्जयमान भएको थियो । उपमेयरमा उमा काफ्ले र पम्फावती खनाल दुबैको नाम सिफारिस भयो । पछि जिल्ला कमिटीले काफ्लेको नाम सर्वसम्मत गरायो ।
बैशाख २८ गते पुनः भैरहवाको लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघको हलमा एमालेको अर्को सभा सम्पन्न भयो । सभाले एमालेले कसैसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गर्यो । सभामा सहभागी अगुवा कार्यकर्ताले त अन्य दलसँग तालमेल गरे सामूहिक राजिनामा दिनेसम्मको अनौपचारिक निर्णय गरे । त्यसको दुई दिनपछि एमालेका उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसालसहित शीर्ष नेताको आतिथ्यतामा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सम्पन्न अर्को सभाले आसन्न स्थानिय निर्वाचनमा सिद्धार्थनगरमा एमाले कसैसँग तालमेल नगर्ने गरी हरिप्रसाद अधिकारी मेयर र उमा काफ्ले उपमेयर सहित नगरका १३ वटै वडामा उमेदवारी घोषणा गर्यो ।
त्यसको अर्कोदिनदेखि एमालेले घरदैलो शुरु गर्यो । त्यतिबेलासम्म कांग्रेस, माओवादीले उमेदवार नै छनौट गर्न सकेको थिएनन् । राप्रपाले मेयरको छनौट पहिले गरेको भएता पनि उपमेयर उम्मेदवारी मनोनयनको दिन मात्रै गर्यो भने अन्य दलले पनि मनोनयन दर्ताको केही दिन अगाडि मात्रै उम्मेदवार छनौट गरे । यद्यपि एमालेले एकाध महिना पहिलेदेखि तयारी थालेको थियो । एमालेको तीब्र तयारीका बाबजुद पनि भैरहवामा धेरैले एमाले अन्तिम अवस्थामा अन्य दलसँग तालमेल गर्छ भनेर हल्ला गर्दै हिँड्ने पनि धेरै भेटिए । भैरहवामा धेरै हल्ला फिजाइयो । एमाले राप्रपा वा अन्य दलसँग तालमेल गर्छ भनेर भित्रभित्रै व्यापक पारियो । एमालेले मेयर छाड्छ, उपमेयर लिएर चुनाबमा जान्छ भनेर अन्य दल आवद्ध व्यक्तिहरुले सामाजिक सन्जालको प्रयोग मात्रै गरेनन केही केही मिडियालाई पनि प्रयोग गरे ।
असार ९ गते भैरहवामा एमालेको अन्तिम चुनाबी सभा सम्पन्न भइरहँदासम्म पनि एमालेले एक्लै चुनाब लड्छ कि लड्दैन भनेर आशंका गर्नेहरु विद्यमान थिए । तर एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र केन्द्रीय सदस्य लालबाबु यादबले एमालेले असारको दोस्रो हप्ता भैरहवामा लालझण्डा गाड्ने उद्घोष गर्दै मेयर र उपमेयरले जितिसकेको भन्दै अबिर नै लगाइदिए । त्यो दृश्य एमाले समर्थकहरुलाई खुसीलाग्दो थियो भने अन्यलाई हाँसोलाग्दो । हाँसोमा उडाउनेहरु भन्दै थिए – चुनाब नहुँदै विजयको अबिर, हेर्दै जानु भाषण जे भएपनि एमाले अरुसँगै मिलेर जान्छ वा एक्लै गए पूरै चुनाब हार्छ ।
राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरुले ‘भैरहवामा चुनाब हुँदैन । यो चुनाब मधेसी जनताको पक्षमा छैन्’ भनेर भाषण गरे । महतोसहित महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु अर्कोदिन भैरहवाको होटल पवनमा बसेर उम्मेदवारी दर्ताको सहभागितालाई आफ्नै आँखाले नियाले । र, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म गरेको भाषण फगत रहेछ भन्ने आत्मविश्लेषण गर्दै अन्यत्र लागे ।
उमेदवारको मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरुले ‘भैरहवामा चुनाब हुँदैन । यो चुनाब मधेसी जनताको पक्षमा छैन्’ भनेर भाषण गरे । महतोसहित महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु अर्कोदिन भैरहवाको होटल पवनमा बसेर उम्मेदवारी दर्ताको सहभागितालाई आफ्नै आँखाले नियाले । र, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म गरेको भाषण फगत रहेछ भन्ने आत्मविश्लेषण गर्दै अन्यत्र लागे । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता उत्साहबद्र्धक भयो ।
आठ दलीय र तीन स्वतन्त्र गरी ११ जनाले मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि सोही दिनदेखि भैरहवामा चुनाबी रौनकताले तिब्रता छायो । एमालेका स्थानिय नेताहरु विशेषगरी पुष्पाञ्जली उपाध्याय, भरतकुमार पोखरेल, डा. रामप्रसाद बस्याल, जीवलाल अर्याल, पम्फावती खनाल, राजेन्द्र पन्थी, हितराज पन्थी, हरिप्रसाद अधिकारी, उमा काफ्ले, डासुराम पाण्डे, विष्णु पन्थी लगायत बुद्धजीवि तथा नेता कार्यकर्ताहरुको जोडमा एमाले भैरहवामा एकल चुनाबमा होमियो । नेताहरुले एमालेले भैरहवामा सूर्यध्वजाबाहक झन्डा गाडेरै छाड्ने ६५ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि भित्रभित्रै सिद्धार्थनगर एमालेमय हुँदै गयो । केही नेताहरु एकल चुनाबी मैदानमा जानु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए । तर कार्यकर्ताहरुको व्यापक दबाबका कारण उनीहरु अल्पमतमा परे । र, एकल दौडमा होमिए ।
विगतमा पन्चहरुले शासन गरेको भैरहवामा एमालेको जग बसाल्न गोपीरमण उपाध्यय, पुञ्पराज ज्ञवाली, देवी पाण्डे, बाबुराम अर्याल, यशबहादुर कुँवर, रिद्दी प्याकुरेल, पद्मा प्याकुरेल, रामचन्द्र भट्टराई, बुँद राना, धनपति उपाध्याय, आदित्यनारायण कसौधन, रमेश अर्याल, ठाकुर खनाल, डिबी पुन, चुलई यादबको योगदान स्मरणीय रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
२०४९ सालमा आदित्यनारयण कसौधन सिद्धार्थनगरमा एमालेको तर्फबाट मेयर पदमा उठ्दा २२ सय मत प्राप्त गरेका थिए । ०५४ सालमा राप्रपासँग तालमेल गरी एमालेले उपमेयरमा हरिप्रसाद अधिकारी जित्यो । त्यतिबेला पनि पार्टी एकल रुपमा चुनाबमा लड्नुपर्छ भन्ने व्यापक दबाब थियो तर नेतृत्वले सुनेन । जसको फलस्वरुप स्वतन्त्र रुपमा डा. रामप्रसाद बस्यालले स्वतन्त्र उमेदवारी दिए र २४ सयको हाराहारीमा मत प्राप्त गरे । ०५३ सालको उपनिर्वाचनमा एमाले उमेदवार घनश्याम भुसाललाई जिताउँदाको गुन ०५४ को स्थानिय निर्वाचनमा एमालेले तिरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि ०५३ मा एमालेका धनपति उपाध्ययले यही क्षेत्रबाट सांसद जितेका थिए । ०५६ मा बुँद राना, ०६४ मा देवी चौधरी र ०७० मा भरतकुमार पोखरेल सांसद उठेता पनि पराजित भए ।
यी सबै घटना, परिघटनाले एमाले भैरहवामा कमजोर भएको प्रमाणित हुँदै गएको थियो । तर ०७० पछि एमालेको एउटा समूह पाटिभित्रका अन्तरविरोधलाई चिर्दै अगाडि बढ्यो । जसको फलस्वरुप प्रदेश नम्बर ५ मा नै सिद्धार्थनगरमा सर्वसम्मत उमेदवार सिफारिस गर्न सफल भयो भने बहुमतसहित मेयर र उपमेयर पनि विजयी प्राप्त गर्न पुग्यो ।
निर्वाचनमा जित र हार स्वभाविक पक्ष हो । तर, सिनपामा एमालेले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ भने आन्तरिक व्यवस्थापनको कमीका कारण केही गुमाएको पनि छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा एमालेका मेयर र उपमेयरका उमेदवारहरु प्रतिद्धन्द्धी भन्दा फराकिलो मतान्तरले विजयी हुँदैं इतिहास कायम गरेका छन् । दोस्रो, एमाले पंक्तिले भन्दा पनि आम जनताले कम आशा गरेका वडाहरुमा एमालेले किल्ला गाडेको छ । नगरको ३ र ११ नम्बरमा राप्रपाको विरासतलाई समाप्त नै पार्नेगरी विजय हासिल गरेको छ । वडा नम्बर २, ५ र ९ मा उल्लासपूर्ण ढंगले सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, एमालेको गढ मानिएको वडा नम्बर ८, ७ र १२ मा अध्यक्ष पद गुमाएको छ । उक्त वडामा अध्यक्ष पद बाहेक अन्य सदस्यहरु जितेको एमालेले पराजयको कारण अनेक भएता पनि आन्तरिक व्यवस्थापन मुख्य हुन सक्छ । तर पनि पराजयपश्चात उमेदवारहरुले पार्टी काममा हिजो भन्दा अझ शसक्त ढंगले खटिने प्रतिक्रिया दिनुले एमालेले केही हारेता पनि धेरै जितेकोमा सिंगो नगर खुसी भएको छ ।
खासमा माथिका दृष्टान्त र घटनाले एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर लाग्दै आरोप स्वतः खारेज भएका छन् । मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा बसोबास गर्ने जनताको ठेक्का नै लिएको जसरी दिँदै आएको अभिव्यक्तिको पर्दाफास भएको छ । मधेसका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुराको पर्दा खुलेको छ । अझ मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको सिनपा ११ जहाँ १०८५ मत खसेको थियो । पिपरैया, छोटकी पिपरैया, नौडिहवा, भुजौली र सिपवा गाउँका जनताले एमालेको सूर्यमा गरेको मतदान अर्थपूर्ण देखिएको छ । शतप्रतिशत मधेसी मतादाता रहेको उक्त वडाबाट एमालेका उमेदवार दिलीप यादव, नरेश अहिर, अकबाल अहमद, सहनाज बेगम र सुभावति चमारले अत्याधिक मतले विजयी प्राप्त गरे । सो वडाबाट एमालेका मेयर उमेदवारलाई ३ सय १० मत बढी प्राप्त भएको छ भने उपमेयरको उमेदवारलाई ३ सय ३१ बढी मत प्राप्त भएको छ ।
जबकी मधेसलाई आधार बनाएर निर्माण भएको दल संघीय समाजबादी फोरम नेपालका मेयर उमेदवार अर्जुन जैसवालले सो वडाबाट जम्मा १४ मत प्राप्त गरेका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका मेयरका उम्मेदवार पुनम अग्रवालले जम्मा १ मत प्राप्त गरे । काँग्रेसका मेयर पदका उमेदवार मातृकाप्रसाद यादवले २ सय ६४ मत प्राप्त गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका फैज अहमद खानले १ सय ७७ मत प्राप्त गरेका छन् । जबकी राप्रपाले आफ्नो गढ वडाको रुपमा परिचय दिँदैं आएको उक्त वडामा सो दलका मेयरका उमेदवार सागरप्रताप राणाले २ सय २६ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । यो मतदानले पनि मधेस क्षेत्रका जनता के चाहन्छन भनेर प्रस्टाएका छन् ।
खासमा माथिका दृष्टान्त र घटनाले एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर लाग्दै आरोप स्वतः खारेज भएका छन् । मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा बसोबास गर्ने जनताको ठेक्का नै लिएको जसरी दिँदै आएको अभिव्यक्तिको पर्दाफास भएको छ । मधेसका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुराको पर्दा खुलेको छ ।
नेकपा एमाले मधेसप्रति अनुदार छ भनेर प्रचारप्रसार भइरहेको बेला पश्चिम तराईको मुख्य केन्द्र भैरहवामा एमालेले कब्जा जमाइरहँदा नेपाली राजनीतिमा नै धेरैथरी अड्कलबाजी भइरहेका छन् । भैरहवामा माओवादी केन्द्रका फैज अहमद खानले मेयर पदमा दिएको साहसपुर्ण उमेदवारीले यहाँको राजनीतिको मोड नै परिवर्तन गरिदिएको हो । एमालेको लहर, पाटिभित्रकै अभूतपुर्व एकता, उमेदवारको छनौटमा सजगता, माओवादी केन्द्रबाट खानको उमेदवारी तथा मतादाताको विश्वास र पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र एवं नेता कार्यकर्ताको अहोरात्रको खटन पटनले भैरहवा एमालेमय बनेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ को मुख्य केन्द्र रुपन्देहीको बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटामा सबै दल एकातिर हुँदा पनि एमालेको अभुतपुर्व विजयी एवं दक्षिणी क्षेत्रका गाउपालिकामा आएको सम्मानजनक मतले पनि एमालेप्रति जनाधार बढ्दै गएको पुष्टि गरेको छ । एमालेजनले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानलाई यथावत राख्दै अझै जनपक्षिय काम गर्दै गएमा आसन्न प्रान्त र केन्द्रीय निर्वाचनमा देश एमालेमय हुनेमा कुनै शंका छैन ।
Previous: भारतमा भएको जीप दुर्घटनामा ३ नेपालीको मृत्यु, २ घाइते
Next: बिराटनगरको मतगणना फेरि रोकियो